Cadayn: Arsene Wenger Madaawan xitaa hal kulan Arsenal tan iyo intii uu kategay+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cadayn: Arsene Wenger Madaawan xitaa hal kulan Arsenal tan iyo intii uu kategay+Sawiro
(28-9-2018) Macalinkii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa lacadeeyey in uusan daawan xitaa hal Cayaar kooxdiisii hore tan iyo markii uu kategay 22 Sano kadib.
Arsene Wenger oo Arsenal kategay markii uu dhamaaday Xili cayaareedkii lasoo dhaafay ayaa qof Taageere ah u sheegay in uusan xitaa hal cayaar daawan kulamada kooxdiisii hore isla Markaana uu ku mashaquulsanyahay dano isaga u gaar ah.
Ninkaan 68 Sano jirka ah ayaa Arsenal Macalin u ahaa 1,228 Cayaarood oo uu goob joog ka ahaa Cayaarahaas oo lacayaaray 110,000 daqiiqo mudo 22 Sano ah hadana waxa uu Cadeeyey in uusan daawan kulamada ay Cayaarayaan.
Niall Moran oo ah Taageere Arsenal oo 20 Sano jir ah ayaa Arsene Wenger lakulmay habeenkii isniintii ee la bixinayey Cayaaryaahnka Caalamka ugu fiican markaas oo uu ka mid ahaa dadkii lagu Casuumay sheeko gaaban kadib ayuu weydiiyey hadii uu kawarhayo xaalada Arsenal balse Wenger ayaa ruuxaan Taageeraha ah ugu jawaabay may kama warhayo mana daawan xitaa hal kulan xili Cayaareedkaan.
Wiilkaan yar ee ka mid ah Taageerayaasha Arsenal ayaa sheegay in uu aad uga Naxay Jawaabta Macalin Wenger isla Markaana ay lama filaan ku noqotey in uusan kawar hayn kooxdii uu Macalinka u ahaa 22 kii sano ee lasoo dhaafay.